ဖိုးထက် – ဟိုဆေးရီဇော် မပြင်နိုင်ခဲ့တာတွေ – MoeMaKa Burmese News & Media
ဖိုးထက် – ဟိုဆေးရီဇော် မပြင်နိုင်ခဲ့တာတွေ
December 24, 2015 Aung Htet
(မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅
ကျွန်တော် နိုင်ငံခြားမှာ ကျွန်သက်လေး နည်းနည်း ရှည်ကြာလာတော့အလုပ် အတူတူ လုပ်ရသည့် လူမျိုးပေါင်းကလည်း စုံ လာသည်။ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်း၊ မွန်ဂို၊ ဗီယက်နာမ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဂျပန် အစရှိသည့် နိုင်ငံသားများနှင့် တွေ့ရ၊ ကြုံရသည်။ အလုပ်အတူတူတွဲပြီး လုပ်ရသည်။ လူမျိုးတစ်မျိုးကို ကိုယ်တွေ့ဘူးသည့် လူတစ်ဦး နှစ်ဦး အပေါ်ကြည့်ပြီး စလုံးတွေက၊ ဖားတွေက၊ တရုတ်တွေက အစရှိသဖြင့် တရားသေ မှတ်ချက်ကြီး ချဖို့ မသင့်တော်မှန်း ကျွန်တော် သိပါသည်။ သို့သော်လည်း အလွတ်သဘော မှတ်ချက်တွေကိုဖြင့် ကျွန်တော် ပေးချင်သည်။ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားသူငယ်တစ်ကောင်လို့ အထင်ခံရရင်လည်း ရှိပါစေတော့။
တရုတ်တွေကတော့ဘယ်နေရာ ရောက်ရောက် အစားကောင်း အသောက်ကောင်း မက်သည်။ အစားတစ်လုပ်အတွက် မပျင်းမရိ ချက်ဟယ်၊ ပြုတ်ဟယ်ဖြင့် အချိန်တွေ အကုန်ခံတတ်သည်။ အလုပ်မှာတော့အနည်းငယ် အပျင်းကြီးသည်လို့ ကျွန်တော့် အတွေ့အကြုံလေးဖြင့် မှတ်ချက်ပြုချင်သည်။
ကိုရီးယားတွေကတော့ အလုပ်ကြိုးစားသည်။ နေပူပူ မိုးရွာရွာ အလုပ်ပျက်ခဲသည်။ အလုပ်ရှင်သူဌေး ဘယ်လောက်လူဝါးဝ ပါစေ ပါးစပ်က တပြစ်တောက်တောက်ဖြင့် အပြစ်ပြောနေသော်လည်း ခိုတာ၊ ကပ်တာ မရှိသလောက် ရှားကြသည်။ ဘာဘဲ လုပ်လုပ် ပါလိ..ပါလိ။ မြန်မြန် မြန်မြန်။ စိတ်မြန် လက်မြန်တွေဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံ ရိုင်းသလိုလို ဖြစ်နေတတ်သည်။
စလုံးတွေကတော့အပေါ်ယံလေးလောက်ဘဲ အလုပ်ကို လုပ်ချင်သည်။ သို့သော် အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင် စာရွက်စာတမ်း အတိအကျနဲ့လုပ်တတ်သည်။ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ဖို့ ဘယ်တော့မှမကြိုးစား။ ဥပဒေဘောင်အ တွင်းကဘဲ စကားအကြီးကြီးတွေ ပြောပြီး အလုပ်လုပ်တတ်ကြသည်။ ရပိုင်ခွင့်တွေကို အပြည့်အ၀ယူတတ်သော သူများ လည်း ဖြစ်နေတတ်သည်။ စောဒကတက်ဖို့ ဘယ်သောအခါမှ အားနာမှာမဟုတ်။ အနည်းငယ်ခန့်လည်း တကိုယ်ကောင်းဆန်တတ်ကြသည်လို့သတ်မှတ်သော် ရကောင်း၏။
ဂျပန်တွေကတော့အလုပ်လုပ်သည့် နေရာမှာ သြချယူရသည်။ ကျွန်တော် တွေ့ဖူးသည့် ဂျပန်များဆိုလျှင် အချိန်အလွန်တိ ကျသည်။ မနက် နှစ်နာရီ၊ သုံးနာရီလောက်မှာ အလုပ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အီးမေးလ်တွေ ပို့ထားတတ်သည်။ စားသုတ်သုတ်၊ လာသုတ်သုတ် အလုပ်လုပ်တော့လည်း မြန်က မြန်။ တိက တိကျသည်။ စာအုပ်ကြီးတွေအတိုင်း တရွေးသားမှ အလျှော့ မပေးတတ်သောသူများ ဖြစ်သည်။ သူတို့လို အလုပ်လိုက်လုပ်သည့် နိုင်ငံခြားသားဆိုလျှင်လည်း အလွန်သဘောကျတတ် သလို ငပျင်းများ၊ ဖင်လေးကြီးများကိုလည်း နည်းနည်းမှ သည်းမခံချင်တတ်သော လူမျိုးလို့ဆိုရချေမည်။ အလုပ်ကို နောက် ဆုံး မိနစ်အထိဆွဲထားပြီး မတတ်သာသည့်အဆုံးမှ ထလုပ်တတ်သည့်သူများဆိုလျှင် ဂျပန်များနှင့် အဆင်မပြေနိုင်။
လူသည် လူသာ ဖြစ်သည်။ သူ့ဘာသာ ဘာလူမျိုး ဖြစ်ဖြစ် ပျင်းသူက ပျင်းသည်။ ဖျင်းသူက ဖျင်းသည်။ ကြိုးစားသူက ကြိုး စားသည်။ စိတ်နေစိတ်ထား ကောင်းမွန်သူက ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်လည်း လူမျိုး အကျင့်စရိုက်လေးများကတော့ အ နည်းနဲ့အများ ရှိတတ်ကြသည်။ ကျွန်တော် တွေ့ကြုံဘူးသော လူမျိုးတွေထဲမှာ ကျွန်တော့် စိတ်အခံဖြင့် သိပ်ဓာတ်မတည့်သည့် လူမျိုးတွေလည်း ရှိသည်။ ဘယ်လူမျိုးကိုမှ နှိမ်ချိုး မှတ်ချက်ပေးဖို့ သင့်လည်း မသင့်တော်သလို ဖြစ်လည်း မဖြစ်သင့်ဘူး ဆိုတာ ကျွန်တော် သိပါသည်။ ဒါပေသိ အချို့လူမျိုးများ၏ ယေဘုယျအကျင့်စရိုက်များကို ကျွန်တော်တဦးတည်းသဘော အရ မကြိုက်တာတွေ ရှိသည်။ ဥပမာ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများ။ ကျွန်တော်တို့အခေါ် ဖားများ။
ဖားတွေ၏ (အများစု) ကျွန်တော် မကြိုက်နိုင်ဆုံးသော အကျင့်စရိုက်မှာ အလှအပ အလွန်မက်လွန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့ပိုက် ဆံနဲ့ သူ၊ သူ့ ၀င်ငွေနဲ့သူ၊ သူ့ စိတ်နဲ့သူ သူလုပ်ချင်တာ သူလုပ်နိုင်သော်လည်း သူတို့၏ ရုပ်ဝတ္ထုတွေအပေါ် စွဲမက်လွန်းသည့် စိတ်ဓာတ်ကို ကျွန်တော်မကြိုက်။ နာရီ G Shock ဆိုလျှင် စီးရီးလိုက်မှ။ ကင်မရာဆိုလျှင် အသစ်ပေါ်တိုင်း အဟောင်း နဲ့လည်းချင်သည်။ အ၀တ်အစား သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဝတ်တတ်တာ ကောင်းသော်လည်း အ၀တ်အစားအပေါ်မှာ အလွန်အကျွံ အလေးအနက်ထားလွန်းသည်လို့ ကျွန်တော် မြင်သည်။ အကောင်းကြိုက်လွန်းသည်လို့ ကျွန်တော်ထင်သည်။ အလုပ် လုပ်တော့နည်းနည်းလေး ရေသာခိုချင်သည်။ ပါးပါးနပ်နပ် ရှောင်ထွက်တတ်သည်။ သူတို့အခေါ် Smart ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်သော်လည်း တာဝန်ယူမှုကျတော့ မေးခွန်းထုတ်သင့်သည်လို့ထင်သည်။
ဖားတွေအတွက် အထက်ပါ ကျွန်တော့်မှတ်ချက်များသည် မိုက်မဲလွန်းရာရောက်သလို၊ မဆင်မချင်နိုင်လွန်းတာလည်း ဖြစ် နိုင်ပါသည်။ အလှအပ၊ အ၀တ်အစား၊ အစားအသောက်အတွက် အချိန်တွေ အရမ်းပေးလွန်းသောသူတွေကို ကျွန်တော် မကြိုက်သည့် စိတ်အခံကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖားတွေ၏ ကောင်းကွက်တွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှိပါသည်။ ဖော်ရွေ သည်။ ခင်မင်တတ်သည်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာ ကောင်းသည်။ အလုပ်လုပ်သည့်နေရာတွင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသည်။ မဆိုင်တာကို ၀င်မရှုပ်။ ၀င်မပါ။ သူများအလုပ်ကို ၀င်မကူတတ်သော်လည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် လုပ်နိုင်ကြသူ များပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရာမှာလည်း အဆင့်အတန်းရှိရှိ ပြောနိုင်ကြတာ များပါသည်။ ဘွဲ့ရပညာတတ်များ မဆို ထားနှင့် ကာယအားကိုး အလုပ်လုပ်သည့် ဖိလစ်ပင်းများသည်ပင်လျှင် အင်္ဂလိပ်လို ရေးနိုင်၊ ချွတ်နိုင်၊ ပြောနိုင်၊ ဆိုနိုင်သည်။
တကယ်ကျတော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည်လည်း ကံသိပ်ကောင်းခဲ့တာမဟုတ်။ စပိန်ကိုလိုနီအဖြစ် နှစ်ပေါင်းသုံးရာခန့် နေခဲ့ရ သည်။ ပြီးတော့ အမေရိကန်တွေလက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းလေးဆယ်ခန့်။ ပြီးတော့ ဂျပန်တွေအောက်မှာ ပြားပြားဝပ် အဖိ အနှိပ်ခံခဲ့ရသည်။ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ရေး အချုပ်အချာအာဏာရဖို့ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါက်တာ ဟိုဆေး ရီဇော်တို့လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေက တိုက်ယူ၊ တောင်းယူခဲ့ရသည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ကိုလိုနီစနစ်ကလွတ်ဖို့ ရှေ့ ဆောင် ရှေ့ရွက်ပြုခဲ့ကြသော အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ရှိခဲ့ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာက အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ဖို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း။ ဗီယက်နမ်မှာ ပြင်သစ်တွေကိုခံချလာသည့် ဟိုချီမင်း။ ဖိလစ်ပိုင်မှာ ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော်။
ဒေါက်တာဟိုဆေးရီဇော်က စပိန်အစိုးရနှင့် ဘာသာရေးဗန်းပြပြီး ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးတွေကို ဖိနှိပ်ထားသည့် အကျင့်ပျက် ခရစ် ယာန်ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ရသည်။ သူက စာရေးကောင်း၊ မျက်စိရောဂါ အကုကောင်းသည့် ဆရာဝန်။ တော် လှန်ရေးသမား။ လက်နိုင်ကိုင် တော်လှန်ရေးကို အားမပေးသောခေါင်းဆောင်။
ခေါင်းဆောင်တွေသည် အချို့က မွေးရာပါ ခေါင်းဆောင်အရည်အချင်းရှိပြီးသား ခေါင်းဆောင်တွေ။ အချို့က တော်လှန်ရေး နှင့် ဖိနှိပ်မှုများက ထိုသူကို ခေါင်းဆောင် အရည်အချင်းတွေ ရှိလာအောင် သင်ပေးသွားသည့် ခေါင်းဆောင်တွေ။ နိုင်ငံရေး တိုက်ပွဲတွေ၊ ဘ၀တိုက်ပွဲတွေထဲကမှ မိမိကိုယ်ကိုယ် တော်တည့် မှန်ကန်အောင်နေရင်း ပြည်သူလူထု အားထားရာ အမျိုး သား ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ဒေါက်တာဟိုဆေးရီဇော်သည် ထိုကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင်မျိုး ဖြစ်သည်။
သူ့ဘ၀ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်မှုများတွင် တွေဝေသွားခဲ့သည့် အချိန်တွေရှိသည်။ အားမလို အားမရဖြစ်ဖို့ ကောင်းသည့် လုပ်ရပ်တွေ ရှိသည်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အားနည်းချက်တွေ ရှိသည်။ သို့သော် မတရား ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို တော်လှန် ဆန့်ကျင်ရာမှာတော့ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော်က သူ့ ယုံချက်ကြည်ချက်ကို သေသည်အထိ တစ်ဖ၀ါးမှ နောက်မတွန့်ခဲ့သော သူဖြစ်သည်။
သူ့ကို စပိန်အစိုးရကသေဒဏ်ပေးပြီး သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်ဖို့လုပ်တော့ သေနတ်သမားတွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရပ်ပြီး အပစ် သတ်ခံဖို့ တာဝန်ကျအရာရှိထံ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အရာရှိက ခွင့်မပေး။ အထက်အမိန့်အရ နောက်ကျောပေး ရပ်နေစေသည်။ သူ့ကို ပင်လယ်ကြီးဖက်သို့ မျက်နှာမူစေသည်။ ပစ်သတ်မည့် သေနတ်သမားတွေက သူ့နောက်က နေရာယူသည်။ သူ တောင်းဆိုတာကိုမရတော့ ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော်က နောက်တစ်ခုတောင်းဆိုသည်။ ခေါင်းကိုမပစ်ဘဲ အဆုတ်ကို ချိန် ပစ်ဖို့။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က ခေါင်းကိုပစ်သတ်လျှင် သူမှောက်လျက်ကြီး သေမှာစိုးသည်။ ခေါင်းကို သေနတ်မှန်လျှင် သတိ လွတ်သွားမှာ စိုးရိမ်သည်။ အဆုတ်ကိုပစ်လျှင် သတိလေး တစ်ချက်တော့ထားနိုင်ပြီး ပက်လက်လှန် သေချင်လို့ဖြစ်သည်။ ကိုလိုနီအစိုးရ ဖိနှိပ်သူ စပိန်တွေကို သေသည်အထိ လက်မြှောက် အရှုံးးမပေးဘူးဆိုသည့်သဘောသာ ဖြစ်သည်။ ဒါကို နား မလည်ရှာသော အရာရှိက အခွင့်ပေးခဲ့ပြီး ဒေါက်တာဟိုဆေးရီဇော်သည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အသက်ထွက်သည်အထိ ဒူးမ ထောက်၊ လက်မမြှောက်သော ဖိလစ်ပိုင် အမျိုးသားသူရဲကောင်းကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သေခြင်းတရားကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ အမှန်တရားဟာ သေခြင်းတရားထက် ပိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဟု ပြသခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ ဟိုဆေးရီဇော်တို့ ရိုက်သွင်းပေးခဲ့သည့် နယ်ချဲ့တွေကို တော်လှန်ပုန်ကန်ရမည်ဆိုသည့် စိတ်ထားတွေကြောင့် ဘယ်နိုင်ငံကမှ ဖိလစ်ပိုင်ကို ကိုလိုနီအဖြစ် ဆက်ထားလို့မရတော့တာ သဘောပေါက်ခဲ့ကြသည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ အချုပ် အချာအာဏာကို အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြရသည်။ သို့သော်လည်း ဖိလစ်ပိုင်သည်လည်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံလို ကံမကောင်း။ ကိုယ်ကျိုးရှာ အာဏာရူး ကိုယ်ပိုင်အစိုးရတွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ တန်ဖိုးကြီး ဖိနပ်အရံပေါင်း သိန်းချီဝယ်စု ဆောင်းသည့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင် မိသားစုဝင်တွေ တွေ့ခဲ့ကြရသည်။ အကျင့်ပျက် လာဘ်စား၊ လက်သင့်ရာ စားခွက်ပေးနှိုက် သည့် အစိုးရတွေ၏ အကျိုးဆက်က အခုထက်ထိ ခံနေရဆဲ ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးက လျော့တိ လျော့ရဲ။ အကျင့်ပျက် ချစားမှုတွေက တောင်လိုပုံဆဲ။
ဖိလစ်ပင်းတွေ အလှအပကြိုက်လွန်းတာ၊ အကောင်းကြိုက်လွန်းတာ၊ ရုပ်ဝတ္ထုကို မက်မောလွန်းတာ စသည့် ကျွန်တော့် မှတ်ချက်တွေသည် အနည်းငယ် မှန်သည်ထားပါစို့။ ဒါဆိုလျှင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားတွေ၏ အပြစ်မဟုတ်။ နိုင်ငံအုပ်ချုပ် သူတွေက အကျင့်ပျက် အကောင်းကြိုက် ခိုးချင်တိုင်း ခိုး၊ ၀ှက်ချင်တိုင်းဝှက်ပြီး နိုင်ငံကိုဦးဆောင်နေကြပါလျှင် နိုင်ငံသား ဖြစ်သူတို့က ကိုယ့်လုပ်အားနှင့် ကိုယ်အကောင်းကြိုက်တာ အပြစ်လို့မယူသော် ရကောင်း၏။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတွေ၏ အကျင့်စရိုက်တွေ အဆိုးအကောင်းအုပ်ချုပ်သူအစိုးရ၏ ရောင်ပြန်ဟပ်မှုတွေ အများကြီး ရှိပါသည်။ လူ့အကျင့်စရိုက်ကို ပြင်ဖို့ မလွယ်သော်လည်း အကောင်းဘက်ကို အများကြီးပါလာဖို့ အုပ်ချုပ်သူများက ဦးဆောင် ဦးရွက် ပြုသင့်သည်လို့ ကျွန်တော် ထင်သည်။ လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်း၏ အကျင့်ဆိုးများ၊ အပျင်းကြီးမှုများ၊ လူဝါး ၀မှုများ၊ အလွယ်လိုက်ချင်သည့် မွေးရာပါ စရိုက်တွေကို စနစ်များက၊ အုပ်ချုပ်မှုပုံစံများက အများကြီး ပြုပြင်သွားလို့ရသည်လို့ ကျွန်တော် ထင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေမှာရော မကောင်းတဲ့အချက်တွေ ဘာရှိသလည်း။ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ ဘာရှိသလည်း ရံဖန်ရံခါ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိသည်။ ဉာဏ်ကောင်းသလောက်၊ အတတ်မြန်သလောက် ပြီးပြီးရော အလုပ် လုပ်တတ်ကြသည်။ စိတ်ထား ဖြူစင်ကောင်းမွန်သလောက် တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်၊ တဖွဲ့နှင့် တဖွဲ့ညှိမရနိုင်လောက်အောင် အညှိုးအ တေးကြီး တတ်ကြသည်။ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် ရှိသလောက်၊ လုပ်တတ်ကိုင်တတ်သူကို ဆရာတင်လိုက်ဖို့ ၀န်မလေးသ လောက် ကိုယ်နဲ့တန်းတူ ရည်တူ တစ်ယောက်ယောက်ဟု သတ်မှတ်ထားသောသူက မဆိုစလောက်လေး ရှေ့ရောက်လာ လျှင် မနာလို ၀န်တိုစိတ် ရှိတတ်ကြသည်။ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲဖို့ ၀န်မလေးသလောက် မိမိလှူတန်းသော ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းက တကယ် ထိထိရောက်ရောက် ရှိရဲ့လားလို့မတွေးသူများ ဖြစ်နေတတ်သည်။ ဘုရားမှာ ရွှေငါးကျပ်သား အပြားကြီးလှူဖို့ ၀န်မလေးပေမယ့် အိမ်က အိမ်ဖော်ကို ထမင်း၀၀ မကျွေးချင်သူများ ဖြစ်နေတတ်ကြသည်။ မနက်ခင်းတိုင်း မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်ရကောင်းမှန်းသိပေမယ့် ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သော်လည်း အများဆဲလျှင် လိုက်ဆဲတတ်ကြသည်။ နှလုံးသားက ဦး ဏှောက်ထက် အရှေ့ကို ရောက်ရောက်နေတတ်သည်။
လူတိုင်းတွင် အကျင့်ဆိုး၊ အကျင့်ကောင်းများ ဒွန်တွဲနေတတ်ကြသည်။ ထို့အတူ လူမျိုးတိုင်းတွင်လည်း အတူတူသာဖြစ် သည်။ ကောင်းတာတွေ ရှိသလို မကောင်းတာတွေလည်း ဒုနဲ့ဒေး။ အချို့အကျင့်များက သေသည်အထိ ပြောင်းလည်းဖို့ မရ။ ကိုယ်ပိုင် အမူအကျင့်ဆိုးတွေကို ပြောင်းလည်းဖို့၊ အကျင့်ကောင်းတွေကို ဆက်လက်မွေးမြူဖို့ ဒေါက်တာဟိုဆေးရီဇော် လည်း မတတ်နိုင်။ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက် နည်းပေးလမ်းပြ လမ်းသစ်ဖောက်ပေးခဲ့နိုင်သော်လည်း ကျါန်တော်တို့ဘုရားရှင်ပြောခဲ့သလို မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာမဟုတ်ပါလား။
← လှကျော်ဇော – ငယ်ကကျွမ်းတဲ့ ငယ်ကျွမ်းဆွေ
အေအမ်တီ – ညကို “စကင်” ဖတ်ခြင်း →
ဖိုးထက် – ဆာ အဲလက်စ်၊ ဘောလုံးနှင့် ကျွန်တော်နားမလည်သောအရာများ
April 16, 2015 Aung Htet
February 14, 2014 Aung Htet
ဇော်အောင် (မုံရွာ) ● တရုတ်မကြောက် အမေရိကန်ကို ဂရုမစိုက်တဲ့… ဒူတာတေး
2 thoughts on “ဖိုးထက် – ဟိုဆေးရီဇော် မပြင်နိုင်ခဲ့တာတွေ”
They don’t adapt to new places and cultures. We ve people in the United States who still can’t speak proper English after being here for ten years. They don’t want to venture out. They re too happy in their own little world. They need to be assertive